Sanganisa Pamhepo pamadhora 99 mu Chero Nyika, Chero Bhizinesi Rudzi
Kana iwe ukabatanidza online neCompany Inosanganisirwa, haungori chete nemapepa ako ehurumende akazadzikiswa nekukumisirwa iwe mune nyaya yemazuva, iwe unogashira izere yekubatanidza package inosanganisira sampuro nemitemo kana chibvumirano chekushanda (zvinoenderana nekuti iwe wakaumba mubatanidzwa kana yakatemerwa chikwereti kambani), mafomu emitero akapera, zvidiki zvebhizimusi zvekutungamira zvinhu uye 100% rutsigiro. Akagadziriswa mapakeji anosanganisira akanyoreswa ejenti masevhisi egore rekutanga, akazara emakambani emakiti uye nezvimwe. Kana iwe ukasarudza yakazara package iwe unosimudzira zvega kuti ikurumidze kunyorera nenyika yako, mafomu ese emitero achazadzikiswa uye FedEx yekupedzisira kuendesa kwauri.
Kupinza pamhepo kunokurumidza uye nyore. Iwe unongopedzisa nhanho-nhanho maitiro, simbisa iyo ruzivo iwe yawakaendesa uye nekupa muripo… uye wapedza! Makambani Akabatanidzwa anonyora zvese zvinyorwa zvako zviri pamutemo vobva vazvimisikidza nehofisi yebazi renyika chaiyo kuti vanyorwe. Izvo zvakakosha kuti unzwisise maitiro ehurumende, mamwe marudzi esangano uye mamwe mafayipi marudzi anoda kuti magwaro atumirwe kune rakasiyana hofisi yebazi, ndosaka iwe paunosanganisira online nesu, kumhanya, kurongeka uye kugutsikana nekubatanidzwa kwako kwepamhepo kuri avimbiswa. Iwe unogona zvakare kufonera mahofisi edu Muvhuro kusvika Chishanu pakati pa7AM na5PM Pacific Nguva uye utaure kune edu nyanzvi nezvezvaunoda.
Maitiro acho akakomba emhando dzakareruka dzinozotora ruzivo nezve yako bhizinesi, nzvimbo dzebhizinesi uye muridzi ruzivo pamwe nemamwe manhamba esangano, zvinoenderana nerudzi rwechinhu chaunosarudza. Pazasi pane pfupiso yezvatinoda kubva kune edu epamhepo kubatanidza vatengi panguva yechikamu chekuunganidza ruzivo.
Rudzi rweChikwata uye Nzvimbo: Sarudza pakati peSangano, LLC kana LP mune chero makumi mashanu ematunhu.
Pasuru Sarudzo: Sarudza an kusanganisa chigadzirwa pasuru, pane matanho matatu ebasa aunogona kusarudza kubva.
Zvimwe Services: Unogona kukwidziridza pasuru yako nechero rimwe bhizinesi masevhisi, senge Akaundi yeUS Bank, ganda rakasungwa kititi yekambani, maakaundi evatengesi uye nezvimwe.
Company Information: Pano iwe unopa rako rakasarudzika zita rekambani pamwe neimwewo pamwe neruzivo rwemasheya (emakambani) uye yekutanga director runyorwa.
kero: Iwe unopa anosvika matatu maateri ekubatanidzwa kwako, nzvimbo yekutumira, kero yepamutemo uye unosarudza mumiririri wako akanyoreswa.
Raira Ongororo: Ichi chiratidzo chekuona cheruzivo rwese iwe rwawakapa panguva yekubatanidzwa kwepamhepo.
mubhadharo: Unogona kusarudza kubva kusarudzo dzakasiyana siyana gumi.
Kana ruzivo rwacho rukasimbiswa uye ruzivo rwekubhadhara rukatumira yako yekubatanidza odha inosimbiswa nevashandi vedu uye yagadziriswa zuva rebhizinesi iri. Zvichienderana nedunhu, nzira yekufaira uye sarudzo dzebasa dzakasarudzwa, mamwe maodha anotumirwa kuhofisi yehurumende zuva rimwe chetero rekukurumidza kufaira. Izvo zvinokwanisika kuisa pamhepo uye kuti zvinyorwa zvako zviendeswe, zvakanyorwa uye zvidzorere nenyika mumaawa mashoma se12-24, kwete ese matunhu anoshanda - anodaidzira ruzivo.
Chiitiko chekubatanidza hachisi chinhu chinopfuura chinyorwa chinonyorera nehofisi yako yenyika, angave ari munyori wezvematongerwo enyika, komisheni yemubatanidzwa kana dhipatimendi remakambani. Kana iwe ukabatanidza online neCompany Yakabatanidzwa, iwe unovimbiswa 100% kurongeka nekunyora zvinyorwa zvako zvekubatanidzwa, nyika kufaira uye kuzadza bhizinesi package. Iwe unogashira zvinhu pamwe neyako yekubatanidza mapakeji, mafomu emitero, zvigadzirwa zvemakambani, anogara mumiririri sevhisi kwegore rimwe uye zviuru zvezvigadzirwa zvakakosha uye zviwanikwa. Mapakeji edu anotanga ne $ 1 chete uye unogona kutanga maitiro ekubatanidza pamhepo 149/24.
Dzvanya Pano Kuti Upinze Pamhepo Nhasi!
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa muna Zvita 22, 2019